लाखौं र जनावर लाखौं, रंग र तिनीहरूलाई कपाल को उपस्थिति बिना पनि विचार गरेर हटाउन एउटा असल आंकडा छ हामी गर्नुपर्छ। Oddly पर्याप्त तर केही कारण लिङ्कहरू अधिकांश वजन खोने असल आंकडा सिर्जना प्रक्रिया को लागि। यसबाहेक, कारण जीवनको swiftness वा, गर्न conversely, किनभने मानव आलस्य को अब प्रश्न छ "कसरी वजन छिटो घर मा गुमाउन?"। मिथक वा वास्तविकता?
त्यहाँ "घर" पातलो नियन्त्रण बस आलस्य विश्वास नगर्ने धारणा छ। जस्तै, घर मा, र ठाउँ सानो छ, र ठाउँ लामो कसरत लागि उपयुक्त छैन। हो र कुनै "वास्तविक" (पढ्ने: महंगा) पोषणविद् गर्न सक्नुहुन्न, विशेष गरी प्रलोभन पूर्ण फ्रिज देखि। तर साधारण सोचाइ, यो परिवर्तनको सामान्य डर प्रेरित सबै बहाना, जब, एक विशेष इच्छा लुकाउने को कमी काम गर्न।
तपाईं घरमा छिटो वजन गर्ने बारे सोच छ भने, लक्ष्य सेट सुरु। यो वास्तविक, आदर्श छैन लक्ष्य बुझाउँछ। अतिरिक्त वजन को आधा गुमाउने पहिलो हप्ताको लागि योजना छैन। यहाँ प्रति महिना पाँच किलोग्राम छन् - वास्तविक छ। यो वास्तविक हालतमा यो लक्ष्य हासिल गर्न उपलब्ध मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक पनि छ।
यसलाई वजन तीव्र हानि बस मनमोहक, तर उपयोगी छैन छैन भनेर चिनिन्छ। शरीर को लागि, यो विधि असभ्य लाग्न सक्छ, यो यसको लडाई हुनेछ। यो "विद्रोह" को पहिलो परिणाम संग ठूलो कठिनाई किलोग्राम फ्याँकिएको, को slightest राहत उपाय मोड मा आफ्नै प्रकारको कम्पनी गर्न द्रुत फर्कन तथ्यलाई मा नै प्रकट हुनेछ। र फेरि म कसरी सोच्न छ घर मा छिटो वजन।
वास्तविक लक्ष्य - हामीलाई मुख्य सन्देश फर्कन गरौं। आफूलाई लागि achievable मानिन्छ कि ग्राम संख्या निर्धारण। अर्को शब्दमा, के अन्तिम वजन हुनुपर्छ। मित्र मार्फत वा तपाईं को लागि उपयुक्त इन्टरनेट मार्फत दैनिक प्रदर्शन गरिने अभ्यास को एक सेट पाउन। राम्रो साथै परिसर सबैभन्दा सरल शुल्क हरेक बिहान हुनेछ। यसले खाना मा उचित प्रतिबन्ध आयातित गर्न आवश्यक छ, जो मा आधार हुनेछ।
पहिलो स्थानमा कडाई आफूलाई छिटो खाजा सबै प्रकारका निषेध! कुनै पनि बर्गर, shawarma, हट डग र अरुले जस्तै categorically र स्थायी रूपमा आहार देखि बहिष्कृत। मात्र तिनीहरूले ट्रान्स बोसो एकदम यी सबै "उपहार" उदार उपभोक्ता चासो को ब्यानर अन्तर्गत रसायन भरी देखि, अनावश्यक वजन shlopotat जोखिम वृद्धि समावेश गर्न, कि तपाईं बारेमा छ।
सानो मासु, सबै भन्दा हानि - एउटै पनि ससेज-ससेज उत्पादन लागू हुन्छ। हो, तपाईं मेयोनेज वा केचप तिनीहरूलाई साथ दिनु प्रयोग गरिन्छ पनि भने, स्लिम आंकडा बारेमा भूल! मा मुख-टीन केक र eclairs पनि सम्झना छैन। स्वाभाविक, यो रक्सी निकाल्न आवश्यक छ। उहाँले मात्र धेरै उच्च-क्यालोरी छ, तर पनि फेरि फेरि खानाको provokes।
हामी चाहनुहुन्छ भन्दा कम दुई पटक राख्नु - को प्लेट, जोसिलो छैन मा खाना राख्दै। महारत ब्याच, पाँच मिनेट पर्खनुहोस् र आफैलाई सुन्न। के तपाईं साँच्चै एक सानो थप राख्न चाहनुहुन्छ भने। बिस्तारै आफ्नो शरीर सुन्न सिक्न, यो खराब सल्लाह छ। यो स्थिति किनभने खाना प्रक्रिया मानिसहरूको विशिष्ट मनोवृत्ति को, घर मानिस मा वजन कसरी प्रश्न हल गर्दा विशेष गरी महत्वपूर्ण छ।
यो कारणले गर्दा "हानिकारक" खाना गर्न ऊर्जा खपत को आफ्नो दैनिक शेष गणना र पहिलो स्थानमा यसलाई कम गर्न उचित छ। कसरी प्रति दिन ग्यारेन्टी वजन प्रत्येक अतिरिक्त पाँच सय क्यालोरी एक हप्ताको एक पाउन्ड पाउन भने, छिटो घर मा वजन गर्न? प्रोटिन मा धनी खाद्य पदार्थ को आहार मा समावेश गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
Fizzaryadka, एरोविक्स, व्यायाम जटिल - त्यसैले, बोल्न वजन खोने को भरने प्रक्रिया जबरजस्ती गर्न। यो सेट गर्न सही पूरक भन्दा साधारण एलिभेटर छ। विपरीत मात्र उचाल्न। यो हामी, आफ्नो सेवाहरू त्याग्न गम्भीर लोड संग उठाने लागि अपवाद बनाउन पर्छ भन्ने हो।
हाम्रो सिफारिसहरू र प्रश्न सुन्न "कसरी वजन घरमा छिटो गुमाउन", तपाईं सजिलो र रमाइलो हिम्मत। स्वास्थ्य को लागि वजन!
कसरी उपयोगी र प्रभावकारी वजन muesli लागि: ग्राहक समीक्षा
25 कुराहरू: आज यो के, तपाईं आफ्नो वजन प्रक्रिया sabotaging छन्
ल्यापटप प्रेसारियो CQ57: निर्दिष्टीकरण, फोटो र समीक्षा
एक इन्च के हो?7इन्च - कति सेन्टिमिटर?
सुन्दर संयोजन व्यवसायीक 'सिफारिसहरू र समीक्षा: खैरो पाइन्ट संग लगाउन के
पखाला कसरी रोक्न
रचनात्मक व्यापार कार्ड - सफलता पहिलो चरण
"Maynkraft" मा रूपमा ओछ्यानमा, वा भित्री को सुरु भाग बनाउन
प्रतिस्थापन चालक अनुमतिपत्र लागि चिकित्सा प्रमाणपत्र। दायाँ चिकित्सा बोर्ड